Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekupa? Mavhesi Anotaura Nezvekupa
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Persian Polish Portuguese Romanian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vietnamese Welsh Yoruba
Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekupa?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekupa?
Bhaibheri rinokurudzira kuti munhu ape zvichibva pamwoyo uye nechinangwa chakanaka. Rinotaura kuti kupa kwakadaro kunobatsira anenge agamuchira neanenge apa wacho. (Zvirevo 11:25; Ruka 6:38) Jesu akati: “Kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.”​—Mabasa 20:35.
Kupa kunofadza Mwari kwakaita sei?
Kupa kusingafadzi Mwari kwakaita sei?
Mavhesi anotaura nezvekupa
Mwari anoda munhu anopa zvichibva pamwoyo. Bhaibheri rinoti: “Mumwe nomumwe ngaaite sezvaakasarudza kuita mumwoyo make, asinganyunyuti kana achigombedzerwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.”​—2 VaKorinde 9:7.
Kupa zvinobva pamwoyo ndiko “kunamata” kunodiwa naMwari. (Jakobho 1:27) Munhu ane rupo anenge achishanda pamwe chete naMwari, uye Mwari anoona rupo rwakadaro sechikwereti. (Zvirevo 19:17) Bhaibheri rinodzidzisa kuti Mwari pachake ndiye acharipa munhu anenge aratidza rupo.​—Ruka 14:12-14.
Kana munhu akapa aine chinangwa chakaipa. Izvi zvinosanganisira:
Kuda kushamisira.​—Mateu 6:2.
Kuti uzopiwawo chimwe chinhu.​—Ruka 14:12-14.
Kuti Mwari akuponese.​—Pisarema 49:6, 7.
Kana zvichitsigira zvinhu zvisingadiwi naMwari. Semuenzaniso, zvinenge zvakaipa kupa munhu mari kuti abheje kana kuti adhakwe. (1 VaKorinde 6:9, 10; 2 VaKorinde 7:1) Hazvinawo kunaka kupa munhu zvinhu asi iye achikwanisa kushanda kuti azviriritire.​—2 VaTesaronika 3:10.
Kana zvichitadzisa munhu kuriritira mhuri yake. Bhaibheri rinodzidzisa kuti vanababa vanofanira kuriritira mhuri dzavo. (1 Timoti 5:8) Hazvina kunaka kuti baba vape vamwe vanhu zvimwe zvinhu asi mhuri yavo ichisara ichitambura. Jesu akashorawo vaya vaitadza kuchengeta vabereki vainge vakwegura, vachiti zvese zvavaiva nazvo “chipo chakatsaurirwa kuna Mwari.”​—Mako 7:9-13.
Zvirevo 11:25: “Mweya une rupo uchakodzwa, uye anodiridza vamwe kwazvo achadiridzwawo kwazvo.”
Zvainoreva: Kupa kunobatsira apiwa neapa wacho.
Zvirevo 19:17: “Munhu anonzwira nyasha munhu akaderera, anokweretesa Jehovha, uye Iye achamuripa zvaanoita.”
Zvainoreva: Mwari anonzwa seane chikwereti kuvanhu vanobatsira vanoshaiwa, uye anovimbisa kuti achavakomborera.
Mateu 6:2: “Paunopa varombo zvipo uchivanzwira ngoni, usaridza bhosvo pamberi pako, sezvinoita vanyengeri. . . kuti vakudzwe nevanhu.”
Zvainoreva: Hatidi kupa nechinangwa chekuda kuonekwa.
Mabasa 20:35: “Kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.”
Zvainoreva: Kupa nemwoyo wese kunoita kuti ufare.
2 VaKorinde 9:7: “Mumwe nomumwe ngaaite sezvaakasarudza kuita mumwoyo make, asinganyunyuti kana achigombedzerwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.”
Zvainoreva: Kupa zvinobva pamwoyo kunofadza Mwari.
Tsika Uye Mararamiro Kutenda Uye Kunamata Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa
Ukabatsira vamwe uchafara uye ivo vachafarawo. Kupa kunosimbisa ushamwari. Ungaita sei kuti uve munhu anopa achifara?
Ona kuti nei chinoita kuti tipe chichinyanya kukosha.
Nzira Yekuwana Mufaro—Kugutsikana Uye Kuva Nerupo